Wasaarada Ganacsiga Somaliland Oo Soo Saartay Wareegto Hoos Loogu Dhigayo Lacagta (Fiiga) Wakiilada Maraakiibta | Tvsomalilandeurope });
Wasaarada Ganacsiga Somaliland Oo Soo Saartay Wareegto Hoos Loogu Dhigayo Lacagta (Fiiga) Wakiilada Maraakiibta
Wershadaha iyo Dalxiiska Somaliland Maxamed Xasan Sacad (Saajin) ayaa walaac weyn ku Abuurtay shan shirkadood oo caalami ah oo ka shaqeeya Dekeda Berbera kuwaasi oo ah shirkadaha wakiilka ka ah markiibta kontiirada qaada.
Wareegtadan ayaa wasiirka wasaarada ganacsiga iyo wershahadaha Jamhuuriyada Somaliland ku sheegay in ay dib u eegis ah dhimid Kusameyn doonaan khidmadii ay shirkadaha wakiilada maraakiibta koontenardu ka qaadan jireen calaa koonteenar ay ku sameeyen.
khidmadii shirkadaha wakiiilada marakiibta koonteenaradu ku shaqayn jireen oo qaab xisaabeedkeedu ahaa qofkii ama ganacsadaha ay u soo qaadan koontinar 20fiit ah inay ka qaadan jireen $85 khidmad ah, halka ka 40fiit ahna ka qaadan jireen $ 155 . waxaana wareegtadani dhigaysaa in iminka wixii ka danbeeya ganacsada koontinar loo soo qaado laga qaadi doono lacag celcelis ah $85. tusaale ganacsaha magaciisu ku qoran yihiin 100 koontiinar in laga qaado $85 oo kaliya Halka awal hore looga qaadi jiray calaa koontiirar lacag 85$doolar.
waxa jira oo kale in shirkada D.P.World ee maamusha Dekeda Berbera inay shirkadaha wakiilada ka ah maraakiibta ka qaado lacagta adeega dekedeed (Service Port ) oo celcelis ahaa noqonaysa calaa kontiinar $275.625 . tusaale kale 100 koonteenar*275.625= $27,562.5 doolar Halkaana waxa ka muuqata is maandhaaf culays ku ah shirkadaha wakiilada ka ah markiibta koonteenarada Xambaara.
hadaba sida aanu warka ku helnay waxa soo kiciyay ladhkan ka yimi wasaarada Ganacsiga Somaliland Ganacsato ka dalbaday shirkadaha wakiilada ka ah maraakiibta koonteenarada xambaara in ay share ama saami ka siiyaan adeega ay qaadaan ee koonteenarada.
Sidoo kale Wareegtadan Wasiirka Horumarinta Ganacsiga Iyo Warshaduhu soo saaray ma jirto meel kaliya oo bulshada loogu daneeyay oo ganacsatadana culays lagu saaray inay qiimo dhimis usameeyaan shacabka ama dawlada qiimo ujarto sida wakiilada shirkadaha Maraakiibta Koonteenarada Xambaara qiimaha loogu jaray.
illo Wareedyo Rasmiya oo warbaahintu ka heshay xafiisyada shipping lineka berbera ku yaala ayaa tibaaxay in Arinakni sababi karo muran horleh oo mushkilad ku abuura ganacsiga iyo hawl maalmeedka dekada berbera.
xafiisyadashirkadaha ka cawday talaabadan qaarkood ayaa isu diyaarinyaa in inta ka horaysa 21.8.2019 in la xidho oo xafiiyadan oo loo Raro wadamada Jabuuti iyo Eriteria waxaanay sidaa ku war galiyeen qaar ka mid ah shaqaloodi Iyo Macmiishooda Ganacsiga iyagoo ku sababaynaya inaanay isku bixinaynin qaab xisabeedkan wasaaarada ganacsiga ,wershadaha iyo dalxiisku soo rogtay